Dowlada Soomaaliya oo ka soo horjeesatay qaar ka mid ah qodobada ka so baxay Golaha Ammaanka Afrika | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowlada Soomaaliya oo ka soo horjeesatay qaar ka mid ah qodobada ka so baxay Golaha Ammaanka Afrika
Shir jaraa’id oo uu goor dhow qabtay Wasiirka Warfaafinta dowlada federalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ugaga hadlay baaqii ka soo baxay golaha ammanka iyo midowga Afrika.
Hase yeeshee Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay in dowlada ay soo dhoweyneyso balse ay soo dhoweeyso qodobka ah in ergey gaar ah Midowga Afrika uu u soo magacaabo dalka Soomaaliya.
“Dowladaha kenya iyo jabuuti ayaa dadaal dheer ku bixiyay go’aanada shirkaa balse waxaan la yaabanahay dowlada Jabuuti maadaama khilaaf uu hore uga dhexeeyay dowlada Kenya.”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Dubbe.
“Dowlada Jabutti waxa ay sii wadaa wixii aan hore ugaga digney afar sano kahor,kursiga ay Jabuutiku fadhido ee guddoonka Golaha Ammaankana Soomaaliya ayaa xaq u lahayd balse Jabuuti si walaaltinimo ah ayaan ugu ogolaatay Jabuuti.”ayuu yiri Dubbe.
“Majiro urur cambaareyn karo dal madax banaan,waana sharci darro mana soo dhoweyneyso dowlada soomaaliya cambaareynta loo soo jeediyay golaha shacabka .”ayuu yiri wasiirka warfaafinta.
“Waa arrin la yaab leh qodobkaas waana sharci darro, waxa uu si cad uga horimaanayaa waajibaadka shaqo ee amisom ee ah qaraarka 2568 ee ka soo baxay golaha amaanka qaramada midoobay,”ayuu sii raaciyay wasiirka.
Dowlada Soomaaliya oo ka soo horjeesatay qaar ka mid ah qodobada ka so baxay Golaha Ammaanka Afrika was last modified: April 24th, 2021 by Admin